Which time is good? (K.P Astrology) – အခါပေး ဗေဒင်
Which time is good? (K.P Astrology)
akhapaybaydin 27 Aug 2012 Uncategorized
(a) To haveaservant: ( ဝန်ထမ်းစတင် ခန့်ထားရန်။)
You can ask your servant to start his work atatime when the ascendant rising in the East is not afflicted by the significators of the 8th and 12th houses. But, if you appoint him atatime when the sub-lord of the ascendant is the significator of6& 11, you will surely have satisfaction.
Servant ဆိုတာမှာ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းအားလုံးပါပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ ကားဒရိုင်ဘာ၊ အိမ်ဖော်၊ ဘောလုံးသမား စသည်ဖြင့် လခစား အကုန်ပါပါတယ်။ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကို ခန့်မယ်ဆိုရင် စတင်ခန့်ထားရမယ့် အချိန် (၄င်းဝန်ထမ်း စတင် အလုပ်ဆင်းရမယ့် အချိန်) ကိုဖော်ပြထားတဲ့ K.P ဥပဒေသပါ။
စတင်ခန့်ထားရမယ့်အချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ့် အခါလဂ် ဟာ ၈-တန့်၊ ၁၂-တန့် ဇာတ်ဆောင် မဖြစ်ရ။ အကယ်၍ စတင်ခန့်ထားရမယ့်အချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ့် အခါလဂ် ရဲ့ ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ သေချာပေါက် ကြေနပ်ရလိမ့်မယ် လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(b) To buy an article: (ပစ္စည်းဝယ်ရန်။)
The sub-lord of the 2nd house must be deposited in the constellation ofaplanet which is the significator of6& 11.
ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်မယ့် အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၂-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(c) To sell an article: (ပစ္စည်းရောင်းရန်။)
The sub-lord of the 12th house must be situated in the constellation, the lord of which is the significator of the houses6& 11.
ပစ္စည်းတစ်ခု ရောင်းမယ့် အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၁၂-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(d) To enter into service: (ဝန်ထမ်းအလုပ်တာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်ရန်။)
The sub-lord of the 6th house is to be deposited in the constellation of the planet signifying houses 10 & 11.
ဝန်ထမ်းအလုပ်တာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်မယ့်အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၆-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ် သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၁၀-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ ဝန်ထမ်းအလုပ်မှာ အောင်မြင်ပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(e) To sign an agreement: (သဘောတူညီချက်/ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်။)
The sub-lord of the 3rd house is to be deposited in the constellation, the lord of which is the significator of the houses6& 11.
သဘောတူညီချက်/ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၃-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(f) To startabusiness: (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ရန်။)
The sub-lord of the 7th house is to be deposited in the constellation, the lord of which is the significator of the houses6& 11.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်မယ့်အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၇-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(g) To releaseafilm: (ရုပ်ရှင်ကားစတင် ဖြန့်ချီရန်။)
ရုပ်ရှင်ကား စတင်ဖြန့်ချီမယ့်အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၇-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၆-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင်- သင်ဟာ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ရပြီး၊ ဆန္ဒပြည့်ဝမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။
(h) To lay foundation: (အဆောက်အဦး အုတ်မြစ်ချရန်။)
The sub-lord of the 4th house is to be deposited in the constellation of the significator of 11th and notasignificator of5& 12.
အဆောက်အဦး အုတ်မြစ်ချမယ့်အချိန် အခါဇာတာရဲ့ ၄-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၁၁-တန့် ဇာတ်ဆောင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင် ဆန္ဒပြည့်ဝ မယ်လို့ ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ၄-တန့် ဘုတ္တိနက္ခတ်သခင်ဂြိုဟ်ဟာ ၅-တန့်၊ ၁၂-တန့် ဇာတ်ဆောင်တော့ မဖြစ်ရပါဘူး။
Previous KP ဖြင့်ဘောတွက်နည်း မကြာမီ လာမည်…မျှော်
Next စရ၊ ထိရ၊ ဒွေးဒဟနှင့် ကျွန်တော်(၂)
Published by akhapaybaydin
View all posts by akhapaybaydin
Pingback: Which time is good? (Practical Approach)-1 « AKHARPAYBAYDIN
နောက်ဆုံးတင်သော Post များ
ဗဒေငျလမျး4Jul 2020
ကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးနှငျ့ KP ပညာ 18 Jun 2020
⚽One Shot >>>> One Goal.⚽ 12 Jun 2020
သြစတြေးလျ တောမီး (သွစတွေးလြ တောမီး) 12 Jun 2020
US Vs Iran 12 Jun 2020
” အုတ်​မြစ်​ချမင်္ဂလာ” အခါဇာတာ( ” အုတျမွဈခမြင်ျဂလာ” အခါဇာတာ) 12 Jun 2020
အောင်​မြင်​​နေ​သော အမျိုးသမီး စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းရှင်​တစ်​ဦး၏ ဇာတာ(အောငျမွငျနသေော အမြိုးသမီး စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦး၏ ဇာတာ) 12 Jun 2020
MOODY 23 Dec 2019
Donald Trump သက်တမ်းပြည့်မလား၊ Donald Trump သကျတမျးပွညျ့မလား (A KP Appraisal)3Aug 2019
မြစ်စုံ (မွဈစုံ)2May 2019
အဖတ်အများဆုံး Post များ
ကိုယျပိုငျအထကျတနျးကြောငျးနှငျ့ KP ပညာ
⚽One Shot >>>> One Goal.⚽
သြစတြေးလျ တောမီး (သွစတွေးလြ တောမီး)
⚽One Shot >>… on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မလာ…
akharpaybaydin on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မလာ…
Wunna Htun on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မလာ…
akharpaybaydin on တိုက်ခန်းဝယ်ရမလားနှင့် KP ပညာ…
akharpaybaydin on အခါပေးဗေဒင်၏ ဝန်ဆောင်မှုများ